पारस र शोभा उत्कृष्ट खेलाडी - खेलकुद - Radio Kantipur
- राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तानमा पारस खड्का बर्षको उत्कृष्ट खेलाडी भएका छन् । राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित आर्मी अफिसर्स क्लवमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४ जना खेलाडीलाई पछि पार्दै खड्काले बाजी मारेका हुन् ।
यस्तै बर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने र स्पेशल अवार्ड करन के.सी. घोषित हुदै ५० हजार नगद हात पारे । जगत टमाटा उत्कृष्ट कोच घोषित भए । बर्षको उत्कृष्ट खेलाडी महिलातर्फ ब्याटमिन्टनकी शोभा गौचन भए । पपुलर च्वाईस अवार्डको उपाधि टेवल टेनिसका स्यान्टु श्रेष्ठले हात पारे । उनीहरुले सवैले पल्सर मोटरसाईकल पाए । यस्तै लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्डबाट फुटवलका प्रशिक्षक अशोक के.सी. सम्मानित भए । मञ्चले प्रदान गर्दै आएको पारा एथेलेटिकतर्फ को अवार्ड बास्केटवल तथा क्रिकेट खेलाडी हिमाल अर्यालले पाएका छन् । उनीहरु सवैले जनही ५० हजार रुपैयाँ पाए ।
दिदीबहिनी राष्ट्रिय महिला भलिबलको पुरस्कार रकम दोब्बरले वृद्धिमाघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
सभामुख कप महिला भलिबलको क्वार्टरफाइनल समिकरण पूरा माघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
हिमालयन शेर्पा विशाल मेमोरियल गोल्डकपको फाइनलमा माघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
थ्री स्टार खप्तड गोल्डकप फुटबलको फाइनलमामाघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
प्रदेश ७ सेमिफाइनलमा प्रवेशमाघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
थाईल्याण्डबिरुद्ध नेपालको फराकिलो जित माघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
स्म्यास टी–२० क्रिकेट : थाईल्याण्डविरुद्ध टस जितेको नेपालले बलिङ गर्दै माघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलिया एसियन कप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश माघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
खप्तड गोल्डकपमा आजबाट सेमिफाइनल चरण सुरु हुँदैमाघ २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
समूह सी बाट प्रदेश ३ र डी बाट पुलिस क्वाटरफाईनलमा माघ १, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्